Firenena any Oseania | Vaovao momba ny dia
Mizara ho faritra ara-jeografika izao tontolo izao ary iray amin'izany Oseania. Miitatra ity faritra ity samy hemispheres ary mponina manodidina ny 41 tapitrisa no misy azy. Saingy, firy ny firenena misy, aiza ny toerana fizahan-tany nafeniny, inona ny kolontsaina novolavola tao?
Oceania dia faritra kely sy miovaova, izay ahitana toekarena mandroso sy firenena mahantra hafa. I Austria na i Nouvelle Zélande dia miara-monina amin'i Vanuatu, Fidji na Tonga, ohatra. 14 no firenena mandrafitra an'i Oceania ary anio isika dia hahafantatra izay atolotray antsika.
2 Firenena oseania
Tamin'ny voalohany dia tonga tany amin'ny faritra ny mponina ao Oceania 60 taona lasa izay, ary Tamin'ny taonjato faha-XNUMX ihany no nanao izany ny eropeana, amin'ny maha mpikaroka sy mpikaroka. Ireo mpivahiny fotsy voalohany dia nanorim-ponenana tao anatin'ireo taonjato manaraka.
Oseania ahitana an'i Australasia, Melanesia, Micronesia ary Polynesia. Ao Micronesia dia misy ny Nosy Mariana, ny Carolinas, ny Nosy Marshall, ary ny Nosy Kiribati. Ao Melanesia dia i Nouvelle-Guinée, ny Nosy Bismarck, ny Nosy Solomon, Vanuatu, Fidji, ary New Caledonia. Polynesia dia miainga avy any Hawaii mankany Nouvelle-Zélande ary misy an'i Tuvalu, Tokelau, Samoa, Tonga, ny Kermadec Islands, ny Cook Islands, ny Society Islands, the Austral, the Marquesas, Tuamotu, Mangareva, ary Easter Island.
Ny ankamaroany ireo nosy mandrafitra an'i Oseania dia an'ny plate Pacific, takelaka tektonika ranomasimbe izay eo ambanin'ny Oseana Pasifika. Amin'ny lafiny iray, Australia dia ampahany amin'ny takelaka Indo-Australian, iray amin'ireo be antitra indrindra eto an-tany, saingy satria eo afovoan'ny takelaka izy io dia tsy manana hetsika volkanika. Izany dia mifanitsy amin'i Nouvelle-Zélande sy amin'ireo nosy hafa, fantatra amin'ny volkano.
Tahaka ny inona ny zavamaniry any Oseania? Samy hafa be, fa io fahasamihafana io dia amin'ny ankapobeny any Aostralia, tsy amin'ny faritra manontolo. I Aostralia dia manana ala mando, tendrombohitra, morontsiraka, tany efitra miaraka amin'ireo zavamaniry mahazatra an'ireny tontolo ireny. Toy izany koa ny biby.
Manao ahoana ny toetrandro any Oseania? Eny tokoa, any amin'ireo nosy Pasifika mafanal, miaraka amin'ny monsoons, orana mahazatra ary cyclones. Amin'ny faritra hafa, amin'ny maha faritra iray amin'ny faritan'i Aostralia azy dia somary efitra izy io, miaraka amin'ny toetrandro mafana, ranomasina ary Mediteraneana. Ny oram-panala aza any an-tendrombohitra.
Tokony hotadidina fa ny ankamaroan'ny nosy Pasifika, ankoatran'i Nouvelle Zélande sy ny Nosy Easter, dia ao amin'io faritra io eo afovoan'ny tropika sy ny ekoatera. Midika izany fa misy ny toetrandro itoviana, misy fahasamihafana vitsy amin'ny maripana arakaraka ny vanim-potoana.
Tany am-piandohana dia nilaza izahay fa any Oseania dia misy firenena mandroso ary ny hafa mivoatra. A) Eny, I Aostralia sy Nouvelle Zélande ihany no firenena mandroso Saingy i Australia dia manana toekarena lehibe sy matanjaka kokoa noho ny mpifanolo-bodirindrina aminy. teny per capita amin'ity firenena ity dia mitovy amin'ny an'i Canada na France, ohatra, ary ny tsenan-tahiry no mavesatra indrindra amin'ny faritra Pasifika atsimo.
Ho azy New Zealand dia manana toekarena manerantany ary miankina betsaka amin'ny varotra iraisam-pirenena izany. Ny isan'ny firenena roa tonta dia miaina, amin'ny ankapobeny, avy amin'ny indostrian'ny herinaratra, ny famokarana ary ny fitrandrahana. Fa ahoana ny nosy pasifika? Eto ny ankamaroan'ny olona dia miasa amin'ny sehatry ny serivisy, indrindra ny ara-bola sy ny fizahan-tany.
Ireo nosy ny ankamaroany dia mamokatra voanio, hazo, hena, menaka palmie, kakaô, siramamy, sakamalao, ankoatry ny vokatra hafa, ary mihazona ny fifandraisana ara-barotra akaiky amin'i Aostralia sy Nouvelle Zélande ary ireo firenena ao amin'ny faritr'i Azia Pasifika.
Nefa hoy izahay fizahan-tany no kintana manodidina eto ary toy izany koa. Ny ankamaroan'ny mpizaha tany any Oseania dia avy any Etazonia, Fanjakana Mitambatra, ary Japon. Ireo firenena be mpitsidika indrindras araka ny WTO, World Tourism Organization amin'ny Espaniôla, izy ireo dia i Aostralia, Nouvelle Zélande ary Guam.
Australia dia toerana fizahan-tany lehibe eo amin'ny fizahan-tany, misy mpitsidika efa ho 8 tapitrisa isan-taona tonga mitsidika an'i Sydney Harbour sy ny Opera House, ny Gold Coast, Tasmania, ny Great Barrier Reef na ny morontsirak'i Victoria na Ayers Rock, ohatra.
Toerana malaza koa i Nouvelle-Zélande, indrindra fa ny faritra misy azy no toerana hananganana ny trilogy Lord of the Rings malaza. Ny nosy Hawaii dia malaza mandritra ny taona, noho ny morontsiraka, ny volkano, ny valan-javaboary misy azy ireo.
Ny marina dia raha misy firenena 14 ao amin'io faritra io dia tsy azo atao ny mivezivezy rehetra ao anaty dia iray. Fa raha te hizaha toeran-kafa tsy mitovy amin'i Eropa ianao dia mila mandeha ary fantaro fa hahita ianao kolontsaina maro, faritra maro, fiteny maro, nahandro maro. Miaraka amin'ny vola dia ho mora ny mandoa sambo fitsangantsanganana amin'ny faritra iray manokana ary mitsidika toerana maro samihafa, tsy misy vola ary miaraka amina kitapo eo an-tsorokao, mihalasa kely kokoa ireo toerana haleha ary mila mandrindra programa isika.
Fa amin'ny ankapobeny ankehitriny Oceania dia toerana halehan'ny mpivady, namana ary fianakaviana mitady morontsiraka, toerana ho antsitrika na snorkel, hetsika rano isan-karazany, fahitana biby an-dranomasina, haran-dranomasina ... raha fintinina, fialan-tsasatra miala sasatra foana izy io, tsotra araka ny lazain'izy ireo eto.
Ny toerana itadiavan'ny fizahan-tany matetika dia i Polinezia frantsay, misy nosy zato mahery, ary Fidji, firenena iray izay misy nosy 200 fanampiny. Eto dia tsy misy zavatra mora, fa ny zazalahy no toerana tsara tarehy, miaraka Maui, Bora Bora… Afaka manomboka ny dianao any Aostralia ianao ary avy eo mitsambikina mankany amin'ny toeran-kafa, na mifantoka amin'i Aostralia sy Nouvelle Zélande, na ireo nosy Pasifika lehibe kokoa. Mila mandray sarintany ianao ary manomana tsara ny toerana tianao haleha satria, araka ny nolazaiko, dia tsy afaka ny handrakotra an'i Oceania manontolo amin'ny dia iray.
Mila tanàna maoderina ve ianao? Aostralia na Nouvelle Zélande no tanjona. Ianao ve no maniry ny haran-dranomasina tsara indrindra eto an-tany? Ny Great Barrier Reef any Aostralia dia eo amin'ny lalanao. Te hanana tora-pasika nofinofy eo afovoan'ny kolotsaina nosy milamina sy taloha ianao? Eny, Polynesia sy Fidji. Te-hahatsapa ho lavitra ny vahoaka marobe ve ianao? Kiribati, Samoa ary mitohy ny lisitra. Dia tsara!
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » Oseania » Firenena oseania